①Prometric ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (အောက်တွင် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဟုသုံး) သို့ဝင်ရောက်ပြီး Prometric ID ရယူပါ။
②စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်နိုင်ငံ၏ စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်နှင့် စာဖြေဌာနတို့ကို အတည်ပြုပါ။ ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် JFT-Basic စာမေးပွဲအချိန်ဇယား. (PDF:277KB)
③ဖြေဆိုလိုသည့်စာမေးပွဲရက်မတိုင်မီ ရုံးဖွင့်ရက် ၃ ရက် (စာမေးပွဲရက်သည် စနေ၊ တနင်္ဂနွေဖြစ်သည့်အခါ ရုံးဖွင့်ရက် ၄ ရက်)အတွင်း ကြိုတင်စာရင်းသွင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ကိုလည်း ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်၌ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် Prometric ID ဖြင့် Log in ဝင်ပါမည်။
စာမေးပွဲရက်၊ စာဖြေဌာန၊ စာမေးပွဲစတင်ချိန်တို့ကို ရွေးချယ်ပါမည်။
စာမေးပွဲကြေးကို အွန်လိုင်းမှပေးသွင်းရန်အတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်များဖြည့်သွင်းပြီး စာမေးပွဲကြေးပေးချေပါမည်။* ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းတွင် စာမေးပွဲကြေးကို ငွေသားဖြင့်ပေးချေခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
စာမေးပွဲမဖြေမီ စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်ရက်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အဆင့် နှင့် စာမေးပွဲလမ်းညွှန်ဆိုင်ရာ ဖြည့်စွက်စာရွက်စာတမ်းများ ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပါမည်။
စာမေးပွဲဖြေသည့်ရက်တွင် ဖြေဆိုပြီးနောက် ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်တွင် စာမေးပွဲရလဒ် (စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့် စာမေးပွဲရလဒ်)တို့ကို ဖော်ပြပေးပါမည်။
စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက် ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်အတွင်း ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် စာမေးပွဲရလဒ်အကြောင်းကြားစာကို ထုတ်ပေးသွားပါမည်။
①ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ် (voucher) ဝယ်ယူခြင်း (ဦးရာလူစနစ်ဖြင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်း)
လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်သီးသန့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (မြန်မာ နီပေါ )တွင် နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားသော ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher)လျှောက်ထားရမည့်အချိန်စာရင်းကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရပါမည်။*ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher)ဆိုသည်မှာ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်လျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်သည့်နံပါတ်ဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းလိုက်ပါက ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher) တွင် အကျုံးဝင်သည့်ကာလပါရှိပါသည်။
လျှောက်လွှာလက်ခံသည့်ရက်၌ လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်သီးသန့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher)လျှောက်ထားရပါမည် (ဦးရာလူစနစ်)*အကြိမ်ကြိမ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် Prometric ID ရယူရန်ထည့်သွင်းလိုက်သည့် အချက်အလက်များနှင့် ကွဲပြားသောအချက်အလက်များဖြင့်လျှောက်ထားမိပါက လျှောက်ထားမှုမှာ အကျုံးမဝင်တော့ပါ။。
အကျုံးဝင်သည့်အချက်အလက်များဖြင့် လျှောက်ထားလာသော လျှောက်လွှာရှင်များကိုသာ စာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းရန်အတွက်လမ်းညွှန်ချက်များကို Prometric ကုမ္ပဏီမှ e-mail ဖြင့် ပေးပို့ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။*စာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းရမည့်ကာလ၊ ပေးသွင်းရမည့်နည်းလမ်းတို့ကို ထိုလမ်းညွှန်ချက် e-mail ထဲတွင် ဖော်ပြပေးထားပါမည်။
စာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းပြီးနောက်တွင် ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher) နံပါတ်ကို Prometric ကုမ္ပဏီမှ e-mail ဖြင့် ပေးပို့ပေးပါမည်။
②ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher)နံပါတ်နှင့် အကျုံးဝင်သည့်ကာလကို ဖြည့်ပါမည်။
စာမေးပွဲမဖြေမီ စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်ရက်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အဆင့် ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပါမည်။
1. စာမေးပွဲကြေးကို အွန်လိုင်းမှပေးသွင်းမည့်အခါ
စာမေးပွဲကြေးကို အွန်လိုင်းမှပေးသွင်းရန်အတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်များဖြည့်သွင်းပြီး စာမေးပွဲကြေးပေးချေပါမည်။
2. စာမေးပွဲကြေးကို ငွေသားဖြင့်ပေးသွင်းမည့်အခါ
ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher) ရောင်းချသည့်နေရာတွင် ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher)ဝယ်ပြီး စာမေးပွဲကြေး ပေးသွင်းရပါမည်။
*စာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းမှုနည်းလမ်းမှာ နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုကြည့်ရှုပါ။
*ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher) ဆိုသည်မှာ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်နံပါတ်ဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းလိုက်ပါက ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher) တွင် အကျုံးဝင်သည့်ကာလပါရှိပါသည်။ ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher) ရောင်းချမှုအခြေအနေ နှင့် ပတ်သက်ပြီး Prometric ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွင် အတည်ပြုကြည့်ရှုပါ။